Yohane 16 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
16 “Ezi zinto ndizithethile kuni ukuze ningakhutyekiswa.+ 2 Abantu baya kunigxotha kwindlu yesikhungu.+ Enyanisweni, liyeza ilixa laxa wonk’ ubani onibulalayo eya kucinga ukuba unikele inkonzo engcwele kuThixo.+ 3 Kodwa baya kuzenza ezi zinto ngenxa yokuba bengamazanga uBawo okanye mna.+ 4 Noko ke, ezi zinto ndizithethile kuni ukuze, lakufika ilixa lazo, nikhumbule ukuba ndandizixelile kuni.+ “Noko ke, ezi zinto andinixelelanga kuqala, ngenxa yokuba bendinani. 5 Kodwa ngoku ndiya kulowo undithumileyo,+ ukanti akukho namnye kuni undibuzayo athi, ‘Uya phi na?’ 6 Kodwa ngenxa yokuba ndizithethile ezi zinto kuni iintliziyo zenu zizaliswe yintlungu.+ 7 Noko ke, ndinixelela inyaniso, Kokwengenelo yenu ukuba ndimke. Kuba ukuba andimki, umncedi+ akayi kuza kuni; kodwa ukuba ndiyemka, ndiza kumthumela kuni. 8 Akufika uya kulinika ihlabathi ubungqina obeyisayo ngesono nangobulungisa nangomgwebo:+ 9 okokuqala, ngesono,+ ngenxa yokuba abalubonisi ukholo kum;+ 10 nangobulungisa,+ ngenxa yokuba ndiya kuBawo yaye aniyi kuba sandibona; 11 nangomgwebo,+ ngenxa yokuba umlawuli weli hlabathi ugwetyiwe.+ 12 “Ziseninzi izinto endinokuzithetha kuni, kodwa aninakukwazi ukuzithwala okwangoku.+ 13 Noko ke, xa efika yena, umoya wenyaniso,+ uya kunikhokelela kuyo yonke inyaniso, kuba akayi kuthetha ngokwentshukumisa yakhe, kodwa uya kuthetha izinto azivileyo, yaye uya kuvakalisa kuni izinto ezizayo.+ 14 Lowo uya kundizukisa,+ ngenxa yokuba uya kwamkela koko kukokwam kwaye uya kukuvakalisa kuni.+ 15 Zonke izinto uBawo anazo zezam.+ Kungenxa yoko le nto ndithe wamkela koko kukokwam aze akuvakalise kuni oko. 16 Kwithuba elincinane aniyi kuba sandibona,+ yaye, kwakhona, kwithuba elincinane niya kundibona.” 17 Ngoko ke bambi kubafundi bakhe bathi omnye komnye: “Kuthetha ntoni na oku akutshoyo kuthi, ‘Kwithuba elincinane aniyi kundibona, yaye, kwakhona, kwithuba elincinane niya kundibona,’ nokuthi, ‘ngenxa yokuba ndiya kuBawo’?” 18 Ngoko ke babesithi: “Kuthetha ntoni na oku akutshoyo ngokuthi, ‘ithuba elincinane’? Asikwazi oko athetha ngako.” 19 UYesu wayesazi+ ukuba babefuna ukumbuza, ngoko wathi kubo: “Niyabuzana na phakathi kwenu ngako oku, ngenxa yokuba ndithe, Kwithuba elincinane aniyi kundibona, yaye, kwakhona, kwithuba elincinane niya kundibona? 20 Inene, inene, ndithi kuni, Niya kulila nize nenze isijwili, kodwa ihlabathi liya kuba nemihlali; niya kuba buhlungu,+ kodwa intlungu yenu iya kujikwa ibe luvuyo.+ 21 Umfazi, xa ezala, unentlungu, ngenxa yokuba lifikile ilixa lakhe;+ kodwa xa ethe wazala umntwana oselula, akabi sayikhumbula imbandezelo ngenxa yovuyo lokuba kuzelwe umntu ehlabathini. 22 Nani, ke ngoko, ngoku, eneneni, ninentlungu; kodwa ndiya kunibona kwakhona yaye iintliziyo zenu ziya kuba nemihlali,+ novuyo lwenu akukho bani uya kuluthabatha kuni. 23 Yaye ngaloo mini+ aniyi kundibuza mbuzo konke konke. Inene, inene, ndithi kuni, Ukuba nicela nantoni na+ kuBawo uya kuninika yona egameni lam.+ 24 De kube leli xesha langoku anikaceli nanye into egameni lam. Celani, niya kwamkela, ukuze uvuyo lwenu luzaliswe.+ 25 “Ezi zinto ndizithethile kuni ngemizekeliso.+ Liyeza ilixa laxa ndingayi kuba sathetha kuni ngemizekeliso, kodwa ndiya kunixelela ngokucacileyo ngoBawo. 26 Ngaloo mini niya kucela egameni lam, yaye anditsho kuni ukuba ndiya kunicelela kuBawo. 27 Kuba uBawo ngokwakhe unomsa ngani, ngenxa yokuba niye naba nomsa ngam+ yaye niye nakholelwa ukuba ndaphuma njengommeli kaBawo.+ 28 Ndaphuma kuBawo ndeza ehlabathini. Ngokubhekele phaya, ndiyalishiya ihlabathi yaye ndiyemka ndiya kuBawo.”+ 29 Abafundi bakhe bathi: “Yabona! Ngoku uthetha ngokucacileyo, akuthethi ngemizekeliso. 30 Ngoku siyazi ukuba wazi zonke izinto+ yaye akukho mfuneko yokuba nabani na akubuze.+ Ngako oko siyakholwa ukuba waphuma kuThixo.”+ 31 UYesu wabaphendula wathi: “Niyakholwa na ngoku? 32 Khangelani! Liyeza ilixa, eneneni, lifikile, xa niya kuchithachithwa ngamnye aye endlwini yakhe+ yaye niya kundishiya ndedwa; ukanti andindedwa, ngenxa yokuba uBawo unam.+ 33 Ezi zinto ndiye ndazitsho kuni ukuze ngam nibe noxolo.+ Ehlabathini ninembandezelo, kodwa yomelelani! mna ndiloyisile ihlabathi.”+